Sidee loo aamusiyaa codka Kaaliyaha Google ee taleefanka | Androidsis
Sidee loo aamusiyaa codka Kaaliyaha Google ee ku yaal Android
Eder Ferreño | | Khiyaamada Android, Tababarada
Kaaliyaha Google waa barnaamij muhiim u ah taleefannada maanta ee Android. In kasta oo ay jiraan waqtiyo aan doonaynno inaan isticmaalno. Sababtaas awgeed, shirkaddu waxay soo bandhigtay hawl noo oggolaaneysa inaan si ku meelgaar ah u aamusno kaaliyaha. Hab wanaagsan oo looga hor istaago inuu hadlo, xaalado laga yaabo inaanay annaga noogu roonayn.
Shaqadani waxay u maleyneysaa taas Kordhi ikhtiyaariyada habeynta ee Kaaliyaha Google. Waxaan horay u sameyn karnaa taas ku hadlaan luqado badan ama nala soo wac magac cayiman. Hada, waxaan dooran karnaa markaan rabno inaan ka aamusno taleefankeena. Waxaan ku tusineynaa talaabooyinka aad hoos ku raaci karto.
Marka ugu horeysa waa inaan sameynaa fur Kaaliyaha Google taleefankeena Android. Waxaan ku qabannaa adigoo riixaya badhanka Guriga dhowr ilbiriqsi, illaa ay ka muuqato shaashadda. Ka dib waxaan ku furaynaa saaxir daaqad cusub ka dibna riixnaa sawirkeena astaanta, kaas oo badanaa lagu soo bandhigo qaybta midig ee sare ee shaashadda.
Shaashadda soo socota waxaan ka helnaa dhowr tabs. Midka inaga xiiseynaya kiiskan waa kaaliyaha, oo aan ku cadaadineyno markaa kadibna taleefanka. Marka xigta waxaan galeynaa qeybta Codka halkaasna waa inaan raadineynaa ikhtiyaarka loo yaqaan 'Voice output'.
Markaan gujino xulashadan waxaan arki doonaa inaan helno dhowr ikhtiyaar. Maaddaama aan dooneyno inaan ka aamusno Kaaliyaha Google kiiskan, midka aan dooranayno waa midka kaliya ee gacmo-la’aanta ah. Si kaaliyaha uusan u dhawaaqin, ma awoodi doontid inaad hadasho, illaa iyo inta ikhtiyaarkan lagu shaqeynayo taleefanka.
Xilliga aan rabno inaan tan bedelno, waxaan ku celinaa talaabooyinkan. Marka aan ka dhigno kaaliyaha Google inuu markale cod yeesho oo aan uga shaqeyno Android sida caadiga ah. Marka markasta oo aan dooneyno inaan ka aamusno, waa wax fudud oo aan ku guuleysan karno adigoo raacaya talaabooyinkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sidee loo aamusiyaa codka Kaaliyaha Google ee ku yaal Android
Masters Pokémon Hada waa la heli karaa! Hadda waad u nuglaan kartaa mid ka mid ah cinwaannada la filayo sanadka
Meizu 16s Pro: Dhamaadka dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha